musha NFL Vatambi Bio Dak Prescott Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Dak Prescott Biography inoratidza Chokwadi nezveNyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki - Nathaniel Prescott (Baba), Peggy Prescott (Amai), Mararamiro, Vasikana, Net Worth uye Hupenyu hweMunhu.
Nemashoko akareruka, chinyorwa ichi chinokupa nhoroondo yehupenyu hwe quarterback, kubva panguva dzehudiki hwake kusvika paakave nemukurumbira.
Kuti uwedzere yako autobiography chishuwo, heino mazuva ake ekukura kune vakuru gallery - pfupiso yakakwana yeDak Prescott Bio.
Iyo Biology pfupiso yaDak Prescott. Tarisa hupenyu hwake uye simuka.
Ehe, isu tese tinoziva kuti yake isinganzwisisike yekupasa chiyero che97.3 inoita iye imwe ye akanakisa quarterbacks muNFL sa2021. Nekudaro, vateveri vazhinji venhabvu vanoziva chete chidimbu chehupenyu hwake.
Nekudaro, isu takagadzirira chakadzama chidimbu cheye yake yekuita memoir, iyo iwe yaungawana inonakidza. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Dak Prescott Yemwana Nhau:
Kune ekutanga maBiography, anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti "Dak". Asi zita rake chairo ndiye Rayne Dakota Prescott.
MuAmerican nhabvu quarterback akazvarwa pazuva re29th raJuly 1993 kuna baba vake, Nathaniel Prescott, uye amai, Peggy Prescott, muSulfur, Louisiana.
Iyo quarterback yakauya munyika ino semudiki pavakomana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, inoratidzwa pazasi.
Nekudaro, iye ane vamwe vanun'una vaviri avo vakakonzerwa nemuchato wababa vake wekare.
Sangana nababa vake, Nathaniel Prescott, uye amai, Peggy Prescott. Zviripachena, akagara nhaka yekuonekwa kwababa vake uye kunyemwerera kwamai vake.
Kare muzuva, Prescott aive mwana akajairwa ane rudo rwematoyi rwakanga rusinganzwisisike.
Semwanakomana wekupedzisira wepamba pake, aifarira rudo rukuru kubva kuvakoma vake vakuru. Kutenda kwavari, udiki hwake hauna kuona kusurukirwa.
Hwehudiki hwake hwaitenderera pahama dzake nematoyi akanaka.
Unoziva here?… Mumhanyi nevakoma vake vakarerwa ari ega naamai vavo.
Izvi zvinodaro nekuti vabereki vake vakarambana achiri mudiki. Dambudziko rese rakagadzira matambudziko mazhinji uye rakawedzera kudzvanywa pamari yavo.
Moreso, yakasundira mukoma wake mukuru (Tad) kutora mabasa emunhu mukuru zvakanyanya.
Kuva mwana mudiki kwakauya nemapakeji ake akasarudzika etsvarakadenga nyeredzi. Kutanga, haana kumbobvira anetsekana nezve kuomarara kwekukura.
Chechipiri, zvirongwa zvake zvakadzikiswa pasi pakutamba nhabvu mubhaluni dziva rekushambira, sekuonekwa mumufananidzo pazasi.
Mazuva iwayo apo Prescott mudiki anowanzo kutamba nemvura uye nhabvu panguva imwe chete.
Kukura naTad naJace (munin'ina wake), Prescott aive nenguva yakaoma kuenderana nemitambo yavo. Aigara achibatana navo mukudzidzira kwavo nhabvu nguva dzose uye vaizodzoka kumba vakaneta.
Pane dzimwe nguva aikwikwidzana nevakoma vake, vane muviri waipfuura wake nokure. Mugumisiro wacho wakanga uri kukundwa kunorwadza nguva dzose.
Zvisineyi, amai vaPrescott vaigara vachimukurudzira kuti asatombodzokera shure. Aizomuudza kuti:
"'Kana usingakwanise kumira nembwa hombe, saka unofanira kugara pavheranda.' Saka ndanga ndisiri kuzogara pavheranda ndichiona mumwe munhu achiita zvandinoda kuita. ”
Dak Prescott Mhuri Yemashure:
Zvinosuruvarisa, haabvi kumhuri inogona kumuwanisa hupenyu hwoumbozha. Zvisinei, Prescott akave nerombo rakanaka kuva naamai vanoshanda nesimba.
Hungu, akapedza uduku hwake muurombo. Kare ikako, mhuri yake yaigara mukaravhani chena yaiva nemakamuri matatu.
Zvisinei, pasina nguva vakabva vatama ndokutanga kutandara muhotera nokuti vakanga vasingakwanisi kutenga mari yemagetsi.
Chiri kutishamisa zvikuru inyaya yekuti amai vake vaitarisirawo vamwe vana munharaunda mavo kunyangwe vaine zvishoma.
Dak Prescott Mhuri Kubva:
Pakave nemamwe maonero akasiyana siyana pamusoro pemadzitateguru ake. Imwe huru yekuita ndeyekuti Prescott anogona kunge ari weMexico neSpanish nhaka.
Mamwe mashoko pamusoro peKwakabva kwake anoratidza kuti sekuru vake amai (Glyndell) vaive chizvarwa cheChoctaw-Apache Tribe yeEbarb.
Unoziva here?… The Choctaw-Apache Tribe ndiyo yechipiri pakukura pakati pese nharaunda sere dzeIndia dzekuAmerica dzinozivikanwa zviri pamutemo muLouisiana.
Panguva yemutambo wavo, vanowanzozvishongedza ivo pachavo mune zvakasiyana-siyana zvipfeko zvine mavara, sezvinoonekwa pasi apa.
Kuona zvishoma pamabiko emafaro emhuri yake kwaakabva
Dak Prescott Dzidzo:
Pasinei nemamiriro emari emhuri yake, amai vake vakaita kuti anyore paHaughton High School achishanda semaneja wepanomira marori.
Kunze kwezviitiko zvake zvedzidzo, Prescott akatamba nhabvu yeBuccaneers.
Mufananidzo usingawanzoitika wemumhanyi achiita zvaaida kuita zvakanyanya kuchikoro chesekondari.
Kuita kwake kwainakidza zvekuti kwakaita kuti varairidzi vake vataure nezvake. Pakange paine nguva mune yake yekupedzisira sophomore iyo Prescott yaikwenya kumashure uye ndokupfura pasipoti yaibhururuka ingangoita makumi matanhatu kusvika makumi manomwe mayadhi pasi.
Sekureva kwemurairidzi wake, yaive yekure kure kwaakamboona mwana wepachikoro chepamusoro achikanda. Pasina nguva iri kure, Prescott akatungamira Haughton kuti ave 2010 Dunhu 1-AAAA Champions. Vhidhiyo iri pazasi ndeyekuratidzwa kwehunyanzvi hwekupfuura hunyanzvi.
Dak Prescott Bio - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Mushure mekupedza kwake chikoro chesekondari, mukwikwidzi wekupota akadzora zvakare neMississippi State University (MSU) semunhu achangotanga kuve mutsva muna 2011. Makore ake maviri ekutanga mukoreji nhabvu akashaya mukana wakakwana wekuti mutambi azviratidze.
Kare kumashure, akatanga kutsiva Tyler Russell, uyo aive akazara fomu. Nenguva isipi, mukana webasa rake repakoreji wakauya mushure mekunge Russell atambura nekukanganiswa mu2013.
Ino nguva yakatenderedza, akave akatanga uye akasimbisa slot yake muchikwata chake chekutanga chechikoro. Mukomana wedu aive chikamu chechikwata chakahwina 2013 Liberty Bowl.
Moreso, kugona kwake kusinganzwisisike kwakatomutora iye Anonyanya Kukosha Player yemutambo gore iro.
Imwe yenguva dzinofadza kwazvo pabasa rake rekoreji. Ona kuti vamwe vake vechikwata vanopemberera kuhwina Liberty Bowl.
Dak Prescott Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Shure kwaizvozvo, mutambi ane tarenda akaramba achifadza vateveri nevasori zvakafanana. Mukurumbira wake wakatanga kupararira semoto wakapamhamha sezvaakatyora marekodhi mazhinji uye akagashira kukudzwa kwekuremekedza mupiro wake kuchikwata chake.
Iko hakuna tsananguro yemufaro wakawandisa waainzwa achigamuchira uyu mubairo.
Unoziva?… Muna 2015, Prescott akave mutambi wekutanga kukanda mayadhi anopfuura mazana matatu nekumhanyisa mayadhi angangoita zana mumutambo mumwechete munhoroondo yechikoro chake.
Zvakare, akazove iye chete mutambi wekutumidzwa zita SE Anogumbura Mutambi wevhiki kanokwana muMSU nhoroondo. Zvinokufadza iwe kuziva kuti akapedza koreji basa rake aine makumi matatu neshanu marekodhi echikoro.
Dak Prescott Biography - Kumuka kune Mukurumbira Kubudirira Nhau:
Mune 2016 NFL Draft, maDallas Cowboys akasarudza Prescott senge 135th inotora sarudzo. Sezvaitarisirwa, akatanga semutambi backup mubato rehunyanzvi.
Kubuda kwake muNFL kunoratidza mambakwedza ekutanga nyowani muhupenyu hwake hwebasa.
Kunyangwe kuve rookie, iyo quarterback yakaratidza yakanakisa mukana iyo yakaita kuti vateveri vataure nezvake muNFL. Mukana wake mukuru wekubudirira wakauya mumwaka wake wekutanga mushure mekunge vamwe vatambi vechikuru vaburitswa mumutambo uyu nekukuvara.
Prescott akaona kuti akashandisa zvakanak mukana iwoyu mukana wekuvhara nzvimbo yake muchikwata chake. Sezvandinonyora iyi Bio, iyo quarterback yakapfuura vazhinji veterans uye yakahwina mibairo yakawanda muNFL.
Tarira rookie uyo akapedzisira achitamba zvirinani kupfuura ma veterans mazhinji. Ehe, zvakaoma kumubata kana asimuka.
Kunyangwe Cowboy anobvuma tarenda rake risingawanzo uye haana chinangwa chekumurega aende. Nekudaro, ivo vaive nePrescott akasaina kontrakiti yemakore mana yekuwedzera inoita $ 160 miriyoni muna 2021. Vamwe vese, sekutaura kwavo, inhoroondo.
Nezve Natalie Buffett - Dak Prescott Mudiwa:
Kunze kwemitambo, mutambi anotora hupenyu hwehukama hwake hwakanyanya. Nekudaro, iye akaita yakawanda yekuedza kuchengeta kwake rudo hupenyu hwakavanzika. Mu2019, zvakaratidzwa kuti Prescott aive muhukama hwekudanana neIreland Borba.
Zvinosuruvarisa, shiri dzerudo dzakaenda nenzira dzakasiyana pagore rimwe chete. Anenge mwedzi mishoma mushure, Prescott akatanga kufambidzana naNatalie Buffett, wezvemagariro enhau anokurudzira uye modhi. Akanaka musikana wake ane mukurumbira akakudzwa mune zveinjiniya.
Sangana nemusikana wake akanaka, Natalie Buffett. Chokwadi, vaviri vacho vanonyatsokodzera mumwe nemumwe.
Ehe, Natalie ndiyo tsananguro yerunako uye pfungwa. Musikana waDak Prescott ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora miriyoni imwe panguva yekuburitsa iyi Biography. Vazhinji vateveri vari kutarisira kuti quarterback nemusikana wake vanosunga pfumo semurume nemukadzi, pakupedzisira.
Dak Prescott Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti mutambi ane tarenda ave mukobvu? ... Kutanga, shamwari nemuvengi vakaona kuomesa kunoita mutambi kana akasangana nematambudziko. Ehe, Prescott haina kunaka pakurega. Nekudaro, anotarisana nekutya kwake uye anoshandisa nzira dzekukurumidza kugadzirisa matambudziko ake.
Sezvineiwo, ane hunhu hwakaderera hunoita kuti atarise kune vanhu vane tariro yekufunga. Iwe waigona kutaura kuti aratidzira hunhu hwetsika dzaLeo Zodiac.
Unoziva here?… Dak Prescott ndiye nyanzvi yekuredza. Akadzidza hunyanzvi hwekuredza paanokura muLouisana. Pakanga paine nguva apo Prescott akasiya mukana wekuti aoneke pahusiku-husiku TV yehurongwa hwekubvumidzwa kungoenda kunoredza hove.
Dak Prescott Mararamiro:
Gore ra2021 rakaona iyo Net Kukosha kwePrescott kukwira kumusoro kwekufungidzira kwevateveri. Ehezve, yake yakawanda mibairo ivimbiso yekuti iyo NFL nyeredzi inogona kuwana hupenyu hunofadza.
Maererano ne Forbes, Quarterback ndiye mutambi anobhadharwa zvakanyanya muNFL uye mutambi wechina anobhadharwa zvakanyanya pasi rese.
Dak yakaunganidza madhora makumi mashanu emamiriyoni kubva pamabvumirano ezvemari ega. Nekudaro, yake inofungidzirwa Net Kukosha panguva yekunyora iyi Bio inenge madhora makumi mana emamiriyoni.
Sezviri pachena, Prescott akakura pamashandisiro ake. Kufanana Antoine Dupont, akatenga mota zhinji dzekunze dzinosanganisira Tesla.
Yake 9,000 sq. Ft imba inokwana $ 3.3 mamirioni muProsper, Texas, runako kuona. Iwe wakashuwira kuti iwe waive uchienda naPrescott mushure mekuona vhidhiyo yeimba yake pazasi.
Dak Prescott Mhuri Chokwadi:
Hapana chinhu chakakosha sedzemhuri panhengo yega yega iri kunetsekana nezvekuona kubudirira kwemuriritiri wavo.
Aya ndiwo maPrescotts. Ichi chikamu cheBio yedu chinotaurira zvimwe zvakasarudzika chokwadi nezve nhengo dzemhuri yake, kutanga nababa vake.
Nezve Baba vaDac Prescott:
Zvinosuruvarisa kuti mutambi wacho haana kunakirwa zvakanyanya nerunyararo sababa paudiki hwake. Ehe, baba vake (Nathaniel Prescott) vaive nekurambana kubva kuna amai vake, izvo zvakamuchengetedza kunze kwemufananidzo wekupona kwavo.
Mu2018, baba vaPrescott vakasungwa vekirasi B misdemeanor. Kare kumashure, mapurisa akawana mbanje pamusuwo wedivi remutyairi wemota yaaityaira. Sezve 2020, Nathaniel akazoita hukama hwepedyo nevana vake.
Inguva inofadza sei yekusanganazve pakati pemutambi nababa vake, Nathaniel Prescott.
Nezve amai vaDkt Prescott:
Munhu ane mukurumbira muhupenyu hwake ndiamai vake, Peggy Prescott. Akashanda maawa mazhinji achitarisira kumira kwetiraki asati amhanyira kumba kuPine Creek Mobile Estates kuti abike kudya kwemanheru.
Nekutenda, aigara achikurudzira kumwanakomana wake, uyo akachengeta mazwi ake akarovererwa mumoyo make. Amai vaPrescott vaive vakanakisa nekumupa ongororo yezvaaiita, zvese mukudzidzira nemitambo yemakwikwi.
Zvinosekesa zvakakwana, Peggy akatoronga nguva kumhanya kwake paanodzoka kumba kubva kukoreji. Zvinosuruvarisa, akaonekwa aine Stage 4 kenza yekoloni mukati megore rake nyowani kuMississippi State.
Mushure mekurwa nechirwere chake kwechinguva, Peggy Prescott akapa mweya pazuva rechitatu raNovember 3.
Tarisai amai vake vanonoka, Peggy Prescott. Aive iye wemasimba emhuri yese.
Nezve hama dzaDad Prescott:
Prescott anogovera chisungo chepedyo nevakoma vake vaviri vepedyo, Tad naJace. Nekudaro, iye ane vamwe vaviri vanun'una kubva kumuchato wababa vake wekare. Ivo ndiElliott Prescott (munin'ina-mukoma-wake) naNatalie Prescott-Smith (hanzvadzi yake).
Idzo nguva dzisingakanganwike dzaakapedza aine vanin'ina vake. (LR); Jace, Dak uye Tad.
Semukomana mudiki, mutambi weNFL aivimba naTad, uyo akazadzisa zvese mabasa ababa vake. Muna 2020, rimwe dambudziko rakawira mhuri yake sezvo munun'una wake Jace akazviuraya.
Mushure mekutambudzika kwese, Prescott naTad vakaburitsa mubvunzurudzo kuti kenza yaamai vavo yakatora mutero unorema paJace. Zvinosuruvarisa, ivo havana kuziva kushushikana kwake kwaizokonzeresa kufa kwake kamwe kamwe.
Sekuru nambuya vake vaive Glyndell W. Ebarb naMargaret Ebarb. Vakadiridza rudo rwavo kune mutambi, sezvingaitwa nemambuya ese. Hazvishamise kuti Prescott anowanzo kupa nguva yekunakirwa chikafu chinonaka navo kubva pakubudirira kwebasa rake.
Imwe yemabiko ake asingakanganwike nasekuru nasekuru vake.
Dak Prescott Untold Chokwadi:
Kuputira iyo NFL mutambi's biography, hezvino zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi izvo zvingakubatsire iwe kuti unzwisise zvakakwana kwake Hupenyu Hupenyu.
A Chihuahua Akarapa Asthma Yake:
Kudzoka mumazuva ake ehudiki, Prescott akarwara neasthmatic kurwisa uye kurwara. Kurwara kwake kwaive kwakanyanya zvekuti kwaiwanzo muendesa muchipatara. Iyi nhamo yese yakaita kuti purogiramu yemhuri yake itungamire kutarisirwa kwake.
Zvisinei, hondo yake nechirwere chisingaperi yakasvika pakupera mushure mekunwa mashoma teacups eChihuahua. Ona kuti nhengo dzemhuri yake dzinopupura sei nezvekuti Chihuahua akagadzirisa sei Prescott's asthmatic mamiriro.
Prescott's Jersey Nhamba:
Achigadzirwa neCowboys, mutambi akatambidzwa juzi # 10 nekuti koreji yake # 15 yaive yatogarwa neakagashira akafara, Devin Street. Izvo hazvina kutora nguva yakareba kuti Prescott achinjira mukupfeka # 4 mukuremekedza amai vake, vane zuva rekuzvarwa raive zuva rechina raGunyana.
Dak Prescott Zvipfuwo:
Ehe, iye ane pit-makore maviri ekuzvarwa pit bull anonzi Legend. Sezviri pachena, kuda kwake imbwa yake hakunzwisisike. Pane dzimwe nguva apo Prescott aizoisa mavhidhiyo avo pa Instagram.
Zvakare, mutambi wacho aimbove aine chena lab iyo yaakazopedzisira apa shamwari yemhuri. Akanga ambotumidza zita imbwa; Tibeaux mukuremekedza quarterback Tim Tebow.
Dak Prescott Tattoos:
Kunyangwe iye aine rudo rweininki, iyo Louisiana yakazvarwa celeb haigone kuenzanisa nhamba yematatoo nehama yake Lil Wayne. Kutarisisa muHupenyu Hwake Nyaya inoratidza kuti Prescott akangori inki chete gumi nematatu maTattoo kusvika ikozvino.
Kutaura mashoma, aive nemavara TJP uye JMP akaiswa inki kumashure kweruoko rwake rweruboshwe uye rwerudyi, zvichiteerana. Iwo mavara anongova mavambo ezita remukoma wake.
Iye anoda vakoma vake zvakanyanya zvekuti aive nemazita avo inki pamaoko ese.
Saizvozvo, Prescott aive nezita rake rekutanga, 'DAK' aine korona pamusoro payo uye rugby bhora pasi payo, inki kumusana kwake. Iyi tattoo inomiririra pachena kuda kwake kwakanyanya kwenhabvu.
Nyora yake yekumashure inoratidza rudo rwake rusingapatsanuke rwebhora.
Dak Prescott Biography Pfupiso:
Tisati tapedzisa nhoroondo yemumhanyi, tarisa nekukurumidza pfupiso yeHupenyu Hwake Nhoroondo mutafura iripazasi.
Zita rizere: Rayne Dakota Prescott
Zita rekudanwa: Dak
Nzvimbo yekuzvarirwa: Sarufa, Louisiana
Baba: Nathaniel Prescott
Amai: Peggy Prescott
Vanun'una: Tad, Jace, Elliott, naNatalie Prescott-Smith
Musikana / Wife Kuve: Natalie Buffett
Ireland Borba (aimbova musikana)
Net Worth: $ 40 mamirioni (2021 Stats)
kukwirira: 1.88 m (6 ft 2 mukati)
Ndichiri kunyora iyi biography, isu tinoona kuti quarterback yaive nemhuri yakazvipira kumuona achibudirira. Zvinosuruvarisa, amai vake vane hanya uye mukoma havasi vapenyu kuti vafarire mubairo wezvaakaita.
Parizvino, Prescott achiri neyeuko yenhengo dzemhuri yake dzakafa pamoyo. Ivo vaive chikamu chekukurudzira kwake kukuru kutsvaga nyeredzi.
Rufu rwavo ndirwo rwekutanga chikonzero Prescott nababa vake vakave padhuze zvakare. Tinokutendai nekuverenga kwedu Dak Prescott Yehucheche uye Biography Chokwadi.